စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 14/09/2020)
ဂျန့်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါသည်5ဘရပ်ဆဲလ်စာရင်းထဲကအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်ကဘယ်လ်ဂျီယံအလယ်ခေတ်ဘဏ္ဍာဖြစ်ခြင်းတစ်ဦးနှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးကိုလူသိများသည်ကို ထောက်., အမည်ရ; ဂီတ, ပြဇာတ်ရုံ, ရုပ်ရှင်, နှင့် ရုပ်ပုံလွှာ. ဒါဟာအစဘရပ်ဆဲလ်မှစူပါနီးကပ်, သာတည်ရှိသည် 60 ဘရပ်ဆဲလ်ကနေကီလိုမီတာနဲ့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားနဲ့.
ဒီချစ်စရာကောင်းအလယ်ခေတ်မွို့တှငျလုပျဆောငျဖို့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာခြေလျင်ဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ၎င်း၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းဖမ်းရန် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ, အဖြစ်က၎င်း၏တက်ကြွလေထုခံစားရရန်.
ချီးမွမ်း ယင်းဘာသာရေးသိုးသငယ်၏ချစ်စဖွယ် အတွင်းပိုင်းတည်ရှိသောဗန် Eyck ညီအစ်ကိုများ စိန့် Bavo ဘုရားရှိခိုးကျောင်း. ဂျန့်မြို့မှာ၏ Belfry သွားရောက်ကြည့်ရှု, အဆိုပါ Town Hall, နှင့်မှာမြို့ကုန်သွယ်သမိုင်းမှပိုမိုနီးကပ်စွာရ ဟောငျးငါးစျေး.
အန်းဖရန့်အိမ်မှာအတိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ Get, အဆိုပါ Rijksmuseum မှာအနုပညာနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူ, Van Gogh နှင့် Rembrandt အိမ်ပြတိုက်, နှင့်ကျော်ကြားသော Heineken အတွေ့အကြုံကိုခံစား. စွန့်စားခရီးသွားများအတွက်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်လမ်းများစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်, သမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အ, အမ်စတာဒမ်နှင့်အဓိကအရက်ဆိုင်. အချိန်အတောအတွင်း, တစ်ဦးလျှော့ပေါ့ခံစားနေချိန်မှာ Romantic ထူးခြားတဲ့အမ်စတာဒမ်အတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည် လှေစီး.
ကိုယ်ကသာကြာ 2.5 ဘရပ်ဆဲလ်ကနေနာရီရှိရမှ. သငျသညျပြီးတာနဲ့ ရထားချွတ်ခုန်, ယင်းက Grand Duchy ၏မြို့တော်မှဦးခေါင်းနှင့် Kirchberg လေးပုံတစ်ပုံရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်သင်၏ခရီးစဉ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတရားရေးဥရောပတရားရုံးအဖြစ်က၎င်း၏အများအပြားအရေးကြီးသောအဆောက်အဦးကိုစတင်, နှင့်ဥရောပကော်မရှင်. အဆိုပါ Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာအံ့ဩခြင်း, ဿုံ Renaissance ဆင်ယင်ခြယ်သနှင့်အတူနှောင်းပိုင်း Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာပေါင်းစပ်တဲ့မှတ်တိုင်. ယင်းပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်နှင့်အတူ Continue ချစ်စရာကောင်းလမ်းများ. ယင်းက Grand Duke နဲ့တမြို့ခံတပ်၏နန်းတော်တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းဖမ်းလက်လွတ်မနေပါနဲ့.
အများအပြားဘယ်လ်ဂျီယံမြို့ကြီးများကဲ့သို့ပင်, စျေးကွက်စတုရန်းဗိသုကာတစ်ဦးအထင်ကြီးခင်းကျင်းပါရှိသည်. အလယ်ခေတ်ဗိသုကာအကြွင်းအကျန်တွေအများကြီးပွနျလညျထူထောငျခဲ့ကြသောကြောင့်, ဤသည်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်. တစ်ပျြောရှငျမှတ်စုတွင်, သင်တစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများလျှင်, ထို့နောက်သင်ရိုးရာ Flemish အစားအစာကိုခံစားခြင်းနှင့်သင်တန်း၏လိမ့်မယ်, ဘီယာ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 လွယ်ကူသောနေ့ရထားဖြင့်မီလန် မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-brussels%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အသုံး ဘရပ်ဆဲလ် Daytrips ဂျန့်မြို့မှာ လူဇင်ဘတ် မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ခရီးသွား traveltips